Dhimmi Walqaayit Akkuma Falmisiisaa Ta’etti Jira
Sadaasaa 19, 2018
Naanoo Amaaraa bakka garaagaraa keessatti gaaffiin daangaa fi eenyummaa ka’aa turan. Gaaffii kana xiinxalaa kan ture paartiin dimokraasummaa Amaaraa ADEPAn gumii dhaabaa dhiyeenya geggeesse irratti yaada furmaataa ta’a ka jedhe beeksiseera.
Dubbi himaan gumii Sanaa obbo Migbaaruu Kebbedee akka jedhanitti
Gaaffii eenyummaa kan ilaaleen ejjennoo ADEEPPAAN ykn hirmaattonni gumii Sanaa fudhatan naannoleen Itiyoophiyaa kan sararaman akka heerri jedhutti miti.
Heerri kan ba’e bara 1987 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti naannoleen Itiyoophiyaa keessaa qoodamanii naannoo dha jedhamanii ittiin hojjetamaa kan jiran heerri ba’uu isaa dura jedhan.
Kun heera bu’uura godhatee hojii irra haa oolu jedhee gumichi ennaa mari’atu ulaagaalee arfan naannolee qooduuf kaa’aman bu’uura godhachuu dhaani.
Inni duraa, afaan. Inni lammataa akkaataa itti qubsiifamani. Sadaffaan eenyummaa dha. Inni arfaffaan immoo eeyama. Keessumaa waa’een eeyaaa, ani kan ani buluu barbaadu naannoo isa kanaani naannoo nah in ilaallanneen buluu hin barbaadu jedhee murteessuu qaba jedhan.
Obbo Migbaaruun akka jedhanitti uummati utuu hin fedhin naannoo qooduun dimokraasii miidha. Uummatis komee kaasa kan jiru sababaa kanaafi jedhan.
Dhimmi Raayyaa fi Walqaayit ennaa naannoleen qoodaman uummati waan irratti hin mari’ataniif komee kaasise jedhaniiru. Uummati fedha isaan ani Amaara kan jedhe gara Amaaraa Tigree dha kan jedhe immoo gara naannoo Tigraayitti cituu qaba jedhan.
Hayyoonni dhimmi kana irratti mari’atan uummatichi yaada isaa ibsuuf carraan yoo kennameef deebii ofii kennuu danda’a jedhan jechuun AstEer Misganaw Bahr Daar irraa gabaasteetti.